Siyaasadda Maraykanka ee Bariga Dhexe kaddib isbedelladii ka dhacay Israel iyo Iran
Dhawaan waxaa ay isbeddello ka dhaceen dalka Israel iyo Iran oo hoggaan cusub loo doortay, Haddaba maxaa iska beddeli kara aragtidyadii Joe Biden kahor intii aanu madaxweynaha noqon iyo hadda oo uu madaxweyne noqday.
Lix bilood ayaa hadda laga joogaa markii uu xilka madaxtinimo la wareegay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Intii uu ololaha doorashada ku jiray ayuu mowqiyo gaar ah iska taagay dalalka qaarkood sida Sacuudi Careebiya, Afghanistan iyo barnaamijka nuclearka ee Iran.
Dhawaan waxaa ay isbeddelo ka dhaceen dalka Israel iyo Iran oo hogaan cusub loo doortay. Haddaba maxaa iska beddeli kara aragtidyadii Joe Biden ka hor intii aanu madaxweynaha noqon iyo hadda oo uu madaxweyne noqday?
Su’aalahaas iyo kuwo kale ayaa Maxamed Cabdi Sandhere uu weydiiyey Cabdiraxmaan Takhal oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Cabdiraxman ayaa marka ugu horeysa ka jawaabaya siyaasadda Maraykanka ee dalka Afghanistan ku aaddan.
Dhageyso siyaasadda arrimaha dibadda Biden